I-ANC idinga ‘ukuzinuka amakhwapha’ ngokuhlulwa eNquthu | News24
I-ANC idinga ‘ukuzinuka amakhwapha’ ngokuhlulwa eNquthu
Cape Town – Sekuwumlando ukuthi iNkatha Freedom Party (IFP) inqobe ngamalengiso ukhetho lokuchibiyela obelubhekwe ngabomvu kuMasipala waseNquthu enyakatho neKwaZulu-Natal, nalapho iwine khona amawadi angu-14 kwangu-17.
Abavoti bakule ndawo, engaphansi koMzinyathi District Municipality bakhethe ukunikeza i-IFP amandla okuphinde ilawule iNquthu phezu komkhankaso obushisa phansi wabaholi abaphezulu be-ANC abebelokhu bengena bephuma kule ndawo. Kodwa-ke uKhongolose ugcine uthole amawadi amathathu nje kuphela.
INkatha iwine ngo-56.27% wamavoti nalapho iphinde yathola izihlalo ezingu-19 kwezingu-33 zomkhandlu waseNquthu kanti i-ANC yona ithole ezingu-10.
OLUNYE UDABA: UMBONO: 'AbaseNquthu badle amaphasela okudla base bavotela indlovu'
I-DA ithole izihlalo ezimbili kulo mkhandlu, iNFP yathola esisodwa kanye ne-EFF yathola esisodwa. Lokhu kusho ukuthi iNkatha izokwazi ukuziphathela lo masipala yodwa, ngaphandle kokubusa ngokubambisana nelinye iqembu.
Okhulumela i-ANC, uMdumiseni Ntuli, uthi leli qembu liyalwamukela ukhetho, wathi kodwa lokho akusho ukuthi ukhetho “belungenazo izinkinga nezinselelo”.
Ugxeke abalandeli be-IFP ngokuthi bebelokhu besabisa baphinde bahlukumeze abalandeli be-ANC.
“Siyayemukela imiphumela yokhetho lokuchibiyela njengeqondile, phezu kokukhathazeka kwethu,” usho kanje nalapho ephinde wabongela khona i-IFP ngokunqoba.
UNtuli uqhube wathi i-ANC ikuqaphelile ukuthi igqemeke ingozi ngokulahlekelwa amanye amawadi ebiwawine ngo-Agasti odlule, wathi lokhu kudinga ukuthi “bazinuke amakhwapha”.